Somaliland: Madaxweyne Muuse Biixi Safar Ku Tagaya Kenya Iyo Madaxweyne Uhurru Kenyata Socdaal Ku Imanaya Somaliland - Wargane News
Home Somali News Somaliland: Madaxweyne Muuse Biixi Safar Ku Tagaya Kenya Iyo Madaxweyne Uhurru Kenyata...
Somaliland: Madaxweyne Muuse Biixi Safar Ku Tagaya Kenya Iyo Madaxweyne Uhurru Kenyata Socdaal Ku Imanaya Somaliland
Madaxweynaha JSL Muuse Biixi Cabdi, ayaa la sheegay inuu socdaal ku tagi doono magaalada Nayrobi ee dalka Kenya.
Sidaas waxa bartiisa twitterka ku qoray Rashiid Cabdi oo ah khabiir hore uga tirsanaa hay’adda ICG, ahna nin aad uga falanqooda arrimaha gobalka iyo caalamkaba. Rashiid oo degen magaalada Nayrobi ee dalka Kenya, ayaa waxa kale oo uu sheegay in Madaxweynaha Kenya Uhurru Kenyata uu isna socdaal ku iman doono caasimadda Hargeysa ee Somaliland. Rashiid wuxuu sheegay inuu soo xiganayo warar Kenyan ah oo xogogaal ah, “Xogo Kenyan ah oo xogogaal ah ayaa sheegay in shirkadda Dahab shiil oo ah xawaalada keliya ee aan ahayn mid qas badan ay ka shaqayn doonto Kenya. Kuwa kale waa la xidhi doonaa.” Ayuu yidhi Rashiid oo intaas raaciyay in shirkadda Dahab Shiil ay xidido ku leedahay Somaliland.
Rashiid Cabdi, wuxuu intaas raaciyay, “Iyadoo la filayo in Madaxweyne Biixi uu socdaal rasmi ah oo deg deg ah ku yimaado Nayrobi. Madaxweyne Kenyatta ayaa isna booqan doona Hargeysa ka hor dhammaadka sannadka.”
Ma jiro wax jawaab ah oo ay dawlada Kenya kaga jawaabtay qoraalka uu twitterka ku qoray Rashiid Cabdi oo ah nin xogaha uu baahiyo aad loo xigto, kuna xidhan dad badan oo caan ku ah wararka iyo siyaasadda gobalka Geeska Afrika.
Laakiin qoraalkan uu Rashiid qoray ayaa ku soo beegmaya xilli ay sii xoogaysatay xurguftii diblomaasiyadeed ee u dhaxaysay Kenya iyo Soomaaliya. Rashiid Cabdi ayaa hore u saadaaliyay in Kenya ay qaadi doonto talaaboyin dhawr ah oo ay culays iyo ciqaab diblomaasiyadeed uga dhigayso dawladda Soomaaliya.
Ka dib hadalka Rashiid, Ciidamada ammaanka ee Kenya ayaa la sheegay shalay inay galeen qaar ka mid ah xafiisyada xawilaadaha.